I-Nile Spirit i-Nile emangalisayo, umbono wokushona kwelanga usuka ophahleni
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Hamdi
Uyemukelwa ku-NILE SPIRIT Apts e-WEST bank, imizuzu eyi-15 nje uma uhamba ngemoto ukuya ezindaweni zasendulo zaseGibhithe kanye nokuhamba ngezinyawo okuyimizuzu eyi-10 ukuya esikebheni! Jabulela leli gumbi lokulala eli-1 elibanzi, lesimanjemanje, elihlome ngokuphelele (isitezi se-2). Uzojabulela indawo ethule futhi uphumule kahle ebusuku ukuze uhlole i-Luxor. Jabulela umbono omangalisayo ophahleni lwethu lweNayile futhi uphumule engadini yethu uma udinga ukukhululeka ngemva kosuku olude lokuhlola. Zizwe usekhaya! Singathanda ukukusiza ukuthi uhlele futhi uhlele uhambo lwakho - vele usibuze!
Sitholakala endaweni ETHULE KANYE NEPHEPHILE e-WEST bank, engenazo izivakashi eziningi kune-East Bank. Uzoba seduze nezindawo eziningi ezikhangayo ezinkulu ongazivakashela, futhi uma ufuna ukuvakashela ibhange elisempumalanga, vele uthathe ukugibela isikebhe esisheshayo ukuwela iNayile. Uhambo lwemoto oluyimizuzu eyi-15 kuphela ukuya ezindaweni zasendulo zaseGibhithe: Isigodi Samakhosi, Isigodi Samakhosi, iColossi yaseMemnon, iThempeli laseHatshepsut, iThempeli leMedinet Habu, iRamesseum, iPapyrus kanye ne-Alabaster Factories - ngaphandle kokuwela iNayile. Isakhiwo sethu sivikeleke ngokuphelele.
4.94 ·83 okushiwo abanye
4.94 · 83 okushiwo abanye
Sitholakala e-Ramla, indawo ETHULE futhi IPHEPHILE, eduze nezitolo zekhofi, izindawo zokudlela, nezitolo ezincane ukuze uthenge noma yini oyidingayo. Uzothola yonke into oyidingayo khona kanye ekhoneni. Uzothola ukunambitha kwempilo yangempela yasemaphandleni yaseGibhithe endaweni enokuthula!
Ngizotholakala ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nedolobha lami noma ukuvakasha endaweni. Ngiyi-Egyptologist enelayisensi futhi ngingasiza ukuhlela uhambo oluqondisiwe kuzo zonke iziza zaseGibhithe lasendulo, ukugibela isikebhe sokushona kwelanga emfuleni iNayile, ukugibela ibhaluni lomoya oshisayo, nokugibela amahhashi noma ikamela ukuzungeza idolobhana. Zizwe ukhululekile ukungibuza noma yini mayelana nedolobha lakithi!
Ngizotholakala ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nedolobha lami noma ukuvakasha endaweni. Ngiyi-Egyptologist enelayisensi futhi ngingasiza ukuhlela uh…
UHamdi Ungumbungazi ovelele
Izilimi: العربية, English, Deutsch
Hlola ezinye izinketho ezise- Luxor namaphethelo